Ukukhethwa kwamanoveli akhona
Ukubuyekezwa kwenoveli okukhona
I-Ink Ezwelayo, nguPatrick Modiano
Esikweletini sayo esingapheli kuze kube sekhulwini lama-XNUMX. Isikhathi esigcwele izindaba ezinhle njengoba sihamba ngokuhamba kwesikhathi, uModiano usiholela ecebeni elidala kabusha lowo mbono we-ephemeral. Emcabangweni womkhondo okungenzeka ukuthi singakwazi, noma...
Isiqhingi Sesihlahla Esilahlekile, ngu-Elif Shafak
Yilowo nalowo muthi unezithelo zawo. Kusukela esihlahleni se-apula nezilingo zayo zasendulo, okwanele ukusikhipha epharadesi, kuya emkhiwaneni ovamile nezithelo zawo ezingavamile ezilayishwe uphawu phakathi kwe-erotic nengcwele, kuye ngokuthi uyibheka kanjani futhi, ngaphezu kwakho konke, kuye ngokuthi ubani oyibhekile... Indaba e...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJuan Carlos Onetti
UJuan Carlos Onetti ongacimi, kanye noMario Benedetti no-Eduardo Galeano, bakha i-triumvirate yezincwadi ezisuka e-Uruguay yabo ejwayelekile kuye e-Olympus yezincwadi ngeSpanishi. Ngoba phakathi kwalaba abathathu bahlanganisa yonke into, noma yiluphi uhlobo lwephrozi, ivesi noma amatafula. Yize ngamunye enikeza lokho ...
Ehlobo, nguKarl Ove Knausgård
Indaba yempilo ekuziphendukeleni kwayo okujikelezayo kwezinkathi zonyaka iphawula ukungena nokuphuma okungasho lutho kwesigcawu ngasinye. Esikhathini esidlule, ukuzalwa ebusika kwakuyinselele yokuphila. Namuhla akuyona i-anecdote esobala ukuthi, uma kubhekwa imizamo kaKarl Ove Knausgard ...
Kulowo ongilindile ehleli ebumnyameni, ngu-Antonio Lobo Antunes
Ukukhohlwa kunokuthakazelisa kokukhohlwa ngisho nokuboniswa komuntu siqu njengendlela yokuzivikela, lapho umuntu ememezela lolo hlobo lwama-soliloquies alinganisiwe njengemicabango edluliselwa ekubonisweni kwethu. Lokho kungukuchazwa okunzima kakhulu ngaphambi kokubuka kwethu. Kungenzeka ukuthi, ...
Inhliziyo kaTriana, kaPajtim Statovci
Into emayelana nendawo ethandwayo neyindilinga yaseTriana ayihambi. Yize isihloko sikhomba kokufanayo. Eqinisweni, uPajtim Statovci omuhle omdala kungenzeka angacabangi nokuqondana okunjalo. Inhliziyo kaTriana ikhomba kokuthile okuhluke kakhulu, esitho esiguquguqukayo, kumuntu, ...
Ngizohlala ngedwa futhi ngaphandle kwephathi, nguSara Barquinero
Kuyiqiniso ukuthi kunzima ukuthola amazwi amasha akhuluma ngothando olususelwe ekubalulekeni, nefilosofi, ngokudlulela kusukela ekuthinteni kwesikhumba noma ngisho naku-orgasm. Futhi ukuthi lolu daba luyinselele ephelele yokulandisa lapho umbhali noma umbhali osemsebenzini angakhombisa, uma kungenjalo ...
UMartin Family, kaDavid Foenkinos
Noma ngabe izifihla njengomlando ojwayelekile, sesivele siyazi ukuthi uDavid Foenkinos akacabangi ngemikhuba noma ubudlelwano phakathi kwemindeni efuna izimfihlo noma izinhlangothi ezimnyama. Ngoba umbhali waseFrance osevele waziwa kakhulu emhlabeni ungudokotela ohlinzayo wezinhlamvu ezime futhi ...
Izincwadi ezi-3 ezinhle kakhulu zika-Emil Cioran
Akekho umuntu ongenathemba oqiniseka ngokuphelele ofinyelela kuma-84, njengoba kwenzeka kuCioran. Ngikusho lokhu ngenxa yokuzimisela ukukhomba lo mbhali njengesi-nihilist esikhohlisayo esinenkinga nokwesaba impilo okwakha isimo nokuqukethwe okulandelanayo nokulahlwa kwempilo. ...